HADALKA CAWIL CAQLIGA GELI WAAYE MA KU DIGASHA!! | Toggaherer's Blog
« WARQAD FURAN OO KU SOCOTA MADAXWEYNAHA ,UDUB IYO ISMAACIIL YARE
GARO DABA-DAY GII-GII LEH !!!! »
HADALKA CAWIL CAQLIGA GELI WAAYE MA KU DIGASHA!!
Loolanka siyaasadeed ayaa noqday mid rag badan la gala arimo aan munaasib ahayn iyo hadalo sharaf iyo karaamo dhac ah oo ka baxa afkooda. Waxa shaki weyni galay dad fara badan oo shacbiga Somaliland ka mid ah, kadib markii uu wasiirka maaliyada Somaliland Cawil uu idaacada lasoo fadhiistay hadal ah “hadii nala doorto doorkan waxaanu lacag siin doonaa dadkii la dhacay” qadhaadhaa hadalku oo muxuu shaki ku abuuray shacbi weynihii maqlayey. Waxa isweydiin mudan hadaba, dawladu doorkee ayay kaga jirtaa ilaalinta dhaqaalaha shacbiga iyo dhaca loo gaystay umada ree Somaliland? Dawladu waxay gabtay talaabada sharci ee ah in ay ilaaliso hantida dadka. Iwaxay dawladu ogaan wayday dadka dhaca gaystay iyo raadka halka ay martay hantidii shacbiga ee la dhacay. Hadii ay intaa ogaan la’dahay maxay ka shaqeeyaan C.I.D da dalku ma siyaasiyiinta iyo dhagaysiga mafrishyada ayay noqotay shaqadoodu? Waxa kale oo dad badan isla dhex marayaan ilaa iyo intii uu cawil idaacada kaga hadlay, dawlada ayaa qayb ka ahayd cidii dhacday shacbiga oo soo asaastay khidada lagu dhacay dalka iyo waliba in dawladu u adeegsatay hantidii in ay laaluushyo ku bixiso compaign ka doorashada oo ay adeegsatay dad dumar u badan. Isla markaa waxa dad badani aaminsanyihiin in dawladu ay ogtahay cidii shicibka dhacday oo aanay doonayn in ay baadhitaan ku samayso ama sheegto waxa keenay dhaca intan leeg madaama raadku dawlada galay. Waa shaki shacbi badani isla dhexmarayo maalmahan dambe lana sheegayo in ay soo ifbaxayaan cadaymo iyo tuhuno fara badan.
Cawil hadii uu hadaba sheegay in lacag la siin doono shacbigii la dhacay xagee ayuu ka keenayaa xoolaha la siinayo? Ma siinayaa dadka la dhacay hantida cashuuraha danyarta laga booboo ee caamo iyo curyaan xaq u leeyihiin ilayn jeebka UDUB ka keeni-maayaane?
Hadii hantida cashuuraha shacbi weynaha lagu taakulaynayo dadka dhacan, waxay ahaayeen hantiileyaal iyagu naftooda dhacay danyartana faa’iidada ay ka helayeen halka lagu dhacay waxba kama siinjirin. Sidaa darted xaq uma laha in lagu caawiyo xoolaha danyarta. Ruuxii dhibta kula wadaaga ayaa dheeftana kula wadaaga! Maaha in xoolaha shacbiga, cashuuraha dalka in ay UDUB afarteeda wasiir sida ay doonaan ugu takri falaan. oo u isticmaalaan go’aana ka gaadhaan. ilaalinta hantida ummada iyo dhawrista musuqmaasuqa hadheeyey gebi ahaanba xafiisyada dawladeed & adeega bulshada waxa xil ka saarnaa xisbiga talada haya iyagaana ku wax’la. Ninba korkiisa biyo kama hagrado ee hadii Wasiir Cawil cid caawinayo naftiisa ha ku caawiyo oo ha kala dhexbaxo Somaliland musuqa,dhaca, boobka, iyo hanti korodhsiga uu kaga shaqaysanayo shacbiga isaga iyo inta la hal maashaaba. Waayo hantida caawimada uu sheegay mid uu la yimid dalka maaha oo isaga oo fara madhan ayuu soo galay dalka. Wakhtigan xaadirka ahna wuxuu inoo sheegay in uu qasnado ka buuxsaday hantidii dalka oo uu isbidayo in uu noqdo haayadii samafalka ee united nations ka oo kale. Waxaynu halkaa ka xaqiiqsanayna ama ka garan karnaa dhaca loo gaystay hantidii shacbiga iyo sida looga shaqaystay. Udub haayado shisheeye may caawin hantina dalka kumay lahayn ee dalka ayay boobtay waxaana inoo cadaynaya hadalka cawil. Udub wax ay dadka boobtaba maantana waxaynu hallis u nahay in ay iibsato dalka iyo dadkiisaba.